shelf ụlọ ahịa
trolley ịzụ ahịa
tebulu ndenye ọpụpụ
mkpụrụ osisi & akwụkwọ nri
nkata ịzụ ahịa
Ụlọ ahịa friza
Ndụmọdụ maka ndozi ụlọ ahịa
N'ezie, mgbe anyị zụtara shelves, anyị nwere olile anya na ogologo ndụ ọrụ, ọ ka mma, isi ihe ndị a na -esote n'ịchekwa shelf ụlọ ahịa ka a na -atụ anya na onye ọ bụla nwere ike ileba anya: 1. Nhicha kwa ụbọchị na nhicha ụlọ ahịa ụlọ ahịa kwa ụbọchị, hichapụ ihe were akwa ncha kpuchie ájá, wee hichaa ya ...
Otu esi amata ogo ụlọ ahịa ụlọ ahịa
Site na mmụba nke ọchịchọ ahịa na asọmpi ụlọ ọrụ, ọtụtụ ndị na -emepụta shelf etolitela ma mepụta ọtụtụ ụdị shelf, nke na -enye ndị na -azụ ahịa na ndị na -azụ ahịa nhọrọ ndị ọzọ. Agbanyeghị, n'ihi ọdịiche dị na teknụzụ nhazi shelf, a na -akpata ọdịiche ọnụahịa, w ...
Usoro eji nchekwa yana akpachapụ anya nke nnukwu ụgbọ ahịa ahịa!
site na nchịkwa na 21-08-28
1. Lezienụ anya ka ilele ogo ụgbọ ahịa nnukwu ụlọ ahịa, ọkachasị mma akụkụ oche ụmụaka, lelee usoro, ikike ibu oche oche ịzụ ahịa, mgbanwe ụgbọ ala, ọchịchọ, wdg, na hụ na ụgbọ ala ahụ dị mma tupu enye nwa ahụ ohere ...
Otu esi ahọrọ shelves ụlọ ahịa
Mgbe ị na-ahọrọ shelves ụlọ ahịa, buru ụzọ tụlee nsogbu nke ibu ibu. Adịla ịhọrọ shelves nwere otu ebe. Họrọ shelves dị larịị. Mgbe ịzụrụ, họrọ ogologo kwesịrị ekwesị nke laminate dị ka mkpa ojiji si dị, na ụdị ya, agba a ...
Kedụ ihe ndị na -ebute ekwe ekwe?
Shelves bụ akụrụngwa nchekwa dị mkpa n'ụlọ nkwakọba ihe, ihe owuwu ahụ dị mfe, dị mfe ịtọsa na ịwụnye, nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na -amasị ya, mana shelves na -egosi na -ehulata nrụrụ abụghị ihe ọhụrụ, n'ikpeazụ gịnị kpatara ya? Sọl na -ekwe nrụrụ ka esi eme? 1.The ...
Nsogbu ndị ekwesịrị ị attentiona ntị na mgbe ịzụrụ shelves nchekwa
1. Nkwụsi ike nke shelf abụrụla otu n'ime isi okwu na nhazi ụlọ nkwakọba ihe shelf. Ngwa sara mbara nke usoro ihe eji eme nchara na -egosi mkpa na ịdị ngwa nke nyocha nkwụsi ike. N'ihi na enwere ọtụtụ ihe ejighị n'aka na imewe, ihe owuwu ...
Usoro na usoro nrụnye nke shelf ụlọ elu
Ọdịdị: A na-achịkọta mkpokọta ụdị shelf dị elu, ọ nweghị ịgbado ọkụ dị na saịtị, yana ọmarịcha na mmesapụ aka. Tụnyere ihe eji arụ ọrụ ma ọ bụ ihe nchara akụkụ, ebe ọ bụ na shelf ala ala n'onwe ya na -arụ ọrụ nkwado nke elu ụlọ, ọ nwere ...
Ebumnuche na njirimara nke ewu ewu shelf Yuanda
site na nchịkwa na 21-07-31
N'oge a, ụlọ ọrụ ụlọ nkwakọba ihe na -abawanye, uru ya na -adịwanye obere, mana ụlọ ọrụ na -echekwa ihe ka na -abawanye, nke pụtara na ọchịchọ na -aga n'ihu na -abawanye, ihe ndị a bụ ihe ise kpatara ewu ewu ụlọ nkwakọba ihe na njirimara. ...
Ihe ọgbara ọhụrụ nke shelves
site na nchịkwa na 21-07-26
1. Ịrụ ọrụ ala ka mma Were ụlọ nkwakọba ihe nke elu ụlọ dị ka ọmụmaatụ, mpaghara ala agbanwebeghị, mpaghara ụlọ abawanyela, abawanyela mpaghara ala. E jiri ya tụnyere owuwu ụlọ nkwakọba ihe nchara, itinye ego na owuwu nke shelves ...
Ọdịiche dị n'etiti nnukwu ụlọ ahịa na akwa ụlọ nkwakọba ihe
Enwere ike ịhụ shelf ebe niile na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ebe akụrụngwa na ebe ndị ọzọ. Mgbe anyị gara n'ahịa ịzụ ahịa na ụlọ ahịa dị mma ịzụta ihe, anyị nwere ike ịhụ shelf ụlọ ahịa. N'ihi na ha nwere ọtụtụ ọdịiche, a na -eji ha n'oge dị iche iche. N'okpuru, anyị na -atụnyere nke ...
Atụmatụ na uru nke ụlọ nkwakọba ihe ọkụ
site na nchịkwa na 21-07-09
Selụ bụ ngwa dị oke mkpa na ọganihu ndị na -azụ ahịa. Ogwe nchekwa nchekwa ọkụ nwere ike iji ohere ụlọ nkwakọba ihe mee ihe nke ọma, meziwanye ikike itinye ụlọ nkwakọba ihe, ma gbasaa ike ụlọ nkwakọba ihe; ọ dị mma maka ịchekwa na ịchekwa ngwongwo, ọ nwere ike bụrụ nke izizi, 100% nke ike s ...
Nlekọta na mmezi nke ụlọ nkwakọba ihe
site na nchịkwa na 21-07-02
Site na mmepe teknụzụ na -aga n'ihu, usoro nchekwa ebe nchekwa, dị ka ọkụ, ọkara na akwa dị arọ, na akwa ime ụlọ n'ọgbọ ọhụrụ nke racks, bụ nke mejupụtara ngwakọta jikọtara ọnụ. Ngwakọta ngwakọta nke racks nchekwa na -elebawanye anya. Fre ...
Okwu:Ogige ụlọ ọrụ Zhangcun, Wangzhuang Town, Changshu, Suzhou City, Jiangsu Province, China